Dib-u-raaca Taariikhda Nololeedka Ali Abdalla Saalax – Hoggaamiyihii Halganka dheeraa. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dib-u-raaca Taariikhda Nololeedka Ali Abdalla Saalax – Hoggaamiyihii Halganka dheeraa.
Muqdisho – Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax oo Isniintii ay soo af-jarantay noloshiisa adduunyo, waxa uu ahaa 75 jir 21 Marso 1942 ku dhashay tuulada Baytul Al-ahmar oo hoos timaada deegaanka Sanxaan ee Gobolka Sancaa.
Waxa uu ka dhashay qoys sabool ah, waxa uu ku soo barbaaray nolol halgan ku dhisan ka ddib markii isagoo da’yar kala tageen waalidiintiisa. Bilawgii noloshiisa waxa uu la kawsaday qawsaarnimo, waxa uu ahaa ari jire aan waligii nasiib u yeelan wax-barasho nadaami ah.
Dhamaadkii kontameeyada oo ku samadan 1958 ayuu ku biiray ciidamada Yaman, da’a ahaanna waxa uu jiray 16 sano. Kaddib waxa uu ka mid noqday sanadii 1960-kii dugsiga ciidamada, saddax sano kaddib waxa uu ka qeyb qaatay kacdoonkii Yaman ee September, hayeeshee 1964-tii waxa uu ku biiray dugsiga lagu barto hubka iyo gawaarida gaashaaman si uu ugu gaaroobo dagaalada culus.
Sanadkii 1970 waxa uu ku dhaawacmay dagaal sokeeye oo Yaman ka dillaacay loona kala saftay laba dhinac oo mid ka mid ahi baritaaraysay dawladda Sucuudigga.
Afar sano kaddib dagaalkaas waxa uu ka qeyb qaatay Inqilaab Militari balse sanadii 1975 ayaa loo magacaabay taliyaha Milatariga Magaalada Taciz. Taas oo uu ku kasbaday sumacad ballaaran, waxa uu ku matalay dawladdi la oran jiray Jamhuuriyadda Carabta ee Yaman fagaarayaasha caalamka.
Isla madaxweynihii dawladaas Ibraahim Xamadi iyo walaalkiis ayaa sababo dahsoon loogu shirqoolay 11 Oct ee sanadkii 1977-dii.
Ku xigeenkiisii Axmed Al-Gashami ayaa xilka la wareegay kaas oo isna in ka yar hal sano lagu shirqoolay xafiiskiisa kagadaal markii lagu tuhmay inuu ka danbeeyay dilkii madaxweynihii isaga ka horreeyay.
Cali Cabdalla Saalax oo markaa xubin firfircoon ka ahaa golaha sare ee dawladda ayaa qabtay hogaanka Yamantii la oran jiray Jamhuuriyadda Carabta Yaman Augusto 1978.
Sanad kaddib oo ku beegan 1979-kii ayaa waxa fashilmay isku day Inqilaab oo xilka looga tuuri rabay, wixii waqtigaas ka danbeeyana waxa gabaadsaday Eheladiisa iyo intii aqoonta u saaxiibka aheyd.
Bishii May sanadii 1990-kii waxa uu ku guulaystay inuu la heshiiyo madaxweyniha dawladii iyana la oran jiray Dawladda Yaman ee Dimoqraadiyadda Shacabka. Waxaana madaxweynaha guud ee Yaman loo caleema saaray Cali Cabdalla Saalax halka Cali Saalim Albeidh oo isna dhanka kale madax ka ahaa laga dhigay ku xigeen.
In kasta oo khilaaf labada dhinac dhex-maray dagaal faraha looga gubtay Yaman ka sababay oo loo kala baxay Koofur iyo Waqooyi haddana guusha waxa ay raacday Waqooyiga oo uu hogaaminayay Cali Cabdalla Saalax. Dhammaadkii dagaalka kaddib sanadii 1999 waxa uu si doorasho Madaxtinimo ah ugu guuleystay xilka Madaxweynaha Yaman.
Guushaas waxa ay u aheyd mid taariikhi ah hase ahaatee ma dhexelsiinin deganaan siyaasadeed iyo kursi raaxo, waxa ku furmay mucaarado xoogan, Waqooyiga waxa gadood ka waday Xuutiyiinta hadda soo afjaray waayihiisa dunida, Koofurta waxa ka kacay qolyo leh midawga waxa uu ina duudsiiyay qoondadeenii halka ay birta dhanka kale soofaha ka deyn kooxda Alqaacidda qeybteeda Jaziiratul Carab oo awood muuqata ku lahayd Yaman.
Madaxweyne Saalax dhankiisa isna waxa uu daaqad saaxiibtinimo uga furay Reer Galbeedka siiba Mareykanka taas oo Yaman ka dhigtay goob ay Alqaaciddo u aragtay fursad u furan jihaad, Darooniska Mareykankana u noqotay marin.
Cali Cabdalla Saalax dillaacii gugucii Carabta waxa uu galay liiska hogaamiyaashii Carbeed ee jilbaha u dhigtay kacdoonkii shacabka. Inkasta oo markii danbe ogolaaday isku dayo nabadeed oo ay wadeen dawladaha Khaliij-ka haddana arrintu waxa ay faraha ka baxday June 2011—oo ugu danbeyn sababtay dhaawac soo gaara Mr Saalax isaga oo ku sugan Masjid ku yaal qasriga Madaxtooyada.
9 billood kaddib dhaawicii looga soo daweeyay Sucuudiga waxa billawday habkii looga wareejin lahaa xukunka, waxana Bishii February 2012-kii loo dhiibay Cabdi rabbi Mansuur Haadi Madaxweynaha sharciga ee Iminka.
Wareejinta xukunkiisa kaddib waxa uu noqday laacib kala maareeya siyaasadda Yaman, waxa ku garab noqday Xuutiyiinta, waxa uu tiro dhawr jeer ah u goodiyay Madaxweyne C rabi Mansuur Haadi, waxa uu sidoo kale marar badan canbaareeyay isbaheysiga carabta ee uu horboodayo Sucuudiga isagoo ku sheegay kuwa u adeegsanaya wadanka Hub ay manuuc tahay in la isticmaalo.
Muddo kaddib waxa soo baxay is maandhaaf u dhaxeeya isaga iyo Xuutiyiinta, waxa ay ku eedeeyeen inuu si hoose ula heshiiyay Sucuudiga. Wixii intaas ka danbeeyay waxa bilaabmay canbaareyn labada dhinac hawada isku mariyeen, Hogaamiyaha Xuutiyiinta C Almalik Al-xuutii ayaa mar ku dhawaaqay ineysan natiija kasoo bixi Karin heshiis walba oo dhex mara Cadawgooda, hase yeeshee waxa ka war celiyay Mr Saalax oo dhankiisa sheegay inuu soo afjarayo wadaagii uu la ahaa Xuutiyiinta islamarkaana bog cusub la furanayo isbaheysiga Sucuudiga.
Isbaheysiga aad ayuu u soo dhaweeyay wada hadal uu la qaato Cali Cabdalla Saalax, balse Xuutiyiinta oo u arkay inuu madax mas ku qoob ka cayaarayo ayaa weerar ku ekeeyay kolonyo uu la socday, waxa ayna guul taariikhi ku tilmaameen soo afjaridda cimrigiisa 75 sano kaddib Eebe ka sokow.
Qore: Ismaaciil Maxamed Samatar – Tifaf-tiraha Idaacadda Himilo.
Previous: 21 Sep – Maalinta Caalamiga ee Nabadda.
Next: Manchester City oo bisha January u dhaqaaqaysa hanashada laacibka Alexis Sanchez.